Fiberglass rebar for la taaban karo - badeecada & liiska qiimaha
+1 (347) 705-78-08 (ku dar. 576182)
Dib -u -celinta GFRP
Fiilo xoojinta Fiberglass
Mireyska miraha fangaska
Xirmooyinka derbiga isku dhafan
Alwaaxda beerta muraayadaha indhaha
Xoojinta lagu kalsoonaan karo oo aan bir lahayn
Xoojinta Fiberglass waxay ka sarreysaa birta astaamo farsamo oo badan waana ka raqiisan tahay!
Tag buugga macluumaadka ee rebar Dhammaan faa'iidooyinka
Waa caan adduunka oo dhan
Fibrelasslass rebar waxaa loo isticmaalaa dhismaha gudaha USA, Canada, Japan, Europe, Australia, Asia iyo Africa.
Amro samee Mashaariic dheeri ah
Mireyska 'Fiberglass Mesh' wuxuu si guul leh u beddelaa birta iyo shabagyada welded - waa ka xoog badan yahay, ka fudud, ka rakhiisan yahay oo sii raagaya. Meelaha caagga ka samaysan caagga kama samaysan biriijyada qabow.
Kaatalogga mesh fiberglass Buugga macluumaadka ee masonry
Codsiyo kala duwan
Dib u xoojinta mesh waxaa loo isticmaali karaa warshadaha, dhismaha wadada, dhismaha guryaha gaarka loo leeyahay, xoojinta qaababka xeebaha. Waxay gaar u tahay xoojinta dhismayaasha sayniska iyo caafimaadka.
Maraakiibta adduunka oo dhan
Waxaan gaarsiin karnaa amarkaaga adduunka oo dhan. Waxaan ku shaqeynaa sharciga INCOTERMS 2010 iyadoo la raacayo shuruudaha FCA. FOB, CIF ama CFR. Gaadiidka xoojinta iskudhafka ayaa ka raqiisan tan bir.
Nagu saabsan Ku saabsan gaarsiinta
Waxaan raadineynaa ganacsato
Ku soo biir kooxdayada oo noqo ganacsade ugu horreeya agabyada casriga ah ee dhismaha ka jira gobolkaaga
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ganacsadaha Nala soo xiriir
Xakameynta wax soo saarka adag
Waxaan si taxaddar leh u xulanaa alaab-qeybiyeyaasha ashyaayada cayriin waxaanan xakameyneynaa marxalad kasta oo wax soo saar ah Waxaan u tijaabinaa alaabadayada si joogto ah.
Faa'iidada Amro samee
Fiberglass rebar & mesh for shubka
Fiberglass rebar waxaa laga isticmaalaa adduunka oo dhan - Mareykanka, Kanada, Japan iyo waddamada Yurub - illaa 1970-kii. Wadamadii horumarsanaa qarnigii la soo dhaafey waxay xaqiiqsadeen inta faa iidada ah ee ay keeni karto adeegsiga muraayada dhalada. Waxaan ku siinnaa rebar leh dhexroor 4 ilaa 22 mm. Waa suurtagal in la soo saaro rebar illaa 32 mm codsi shaqsiyeed ee macaamilka.
Mesh Composite (fiberglass) waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo sagxadaha, waddooyinka, garoomada diyaaradaha iyo qaababka kale ee shubka ah. Tani waa beddel siman oo xoog leh oo mesh bir ah. Waxaan bixinaa mesh leh furitaan kala duwan: 50 * 50 mm, 100 * 100mm, 150 * 150 mm, 200 * 200 mm iyo 300 * 300 mm. Waa suurtagal in la soo saaro cabbirka furitaanka mesh illaa 400 * 400 mm codsi shaqsiyeed ee macaamilka. Dhexroor siligyada la heli karo: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm iyo 8 mm. Lagu keenay duub ama go '.
Masonry mesh waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo dhisida guryaha dhismayaasha ka sameysan baloogyada iyo lebenada dhexroor dherer - 2 mm Lagu bixiyay duub oo leh xulashoo kala duwan oo ballac ah - 20 cm, 25 cm, 33 cm ama 50 cm. Haddii aad u baahan tahay ballac kale, waxaad iibsan kartaa duub ballac ah oo 1m ah oo aad ku goyn kartaa xinjiraha goynta.
Cidda aan nahay iyo faa iidooyinkayaga
KOMPOZIT 21 waa mid ka mid ah soosaaraha ugu weyn Ruushka. Waxaan soo saarnaa wax ka badan 4 mln mitir oo rebar ah iyo 0.4 mln m2 oo mesh sanadkii ah. Faa'iidooyinkayadu waa: qiimaha hooseeya, tayada sare ee alaabta ceeriin iyo xakamaynta tayada adag. Waxaan gaarsiinnaa alaabada adduunka oo dhan.
Rebar tayo sare leh
Keydso ilaa 50%
Kaydi qiimaha dhoofinta
Dhaqdhaqaaqa kuleylka hooseeya
Frp rebar wuxuu 8 jeer ka fudud yahay birta, taas oo yareynaysa culeyska guud ee dhismaha iyo culeyska salka iyada oo aan xoog lumin.
Frp rebar wuxuu aamin u yahay caafimaadka aadanaha mana laha sunta waxyeelada leh. Badbaadada alaabadayada waxaa lagu xaqiijiyay shahaadada nadaafadda.
Waxaad si weyn hoos ugu dhigi kartaa daawada loo yaqaan 'сosts' xitaa haddii aad ka dhigto bir bir dhexroor ah oo leh rebar. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad ka fiirsato in aad ku beddesho xoogga kaydinta waxay noqon doontaa 50%.
Waxaad keydisaa soo-gaarsiinta sabab la xiriirta culeyska fudud ee rebar. 3000 mitir oo ah frp rebar waxay ku habboon yihiin jirridda gaariga. Tiradaan ayaa ku filan si ay u xoojiso aasaaska salka ee guri dhexdhexaad ah.
Waxaad yareyn doontaa kharashyada ku saabsan dayactirka dhismaha. Dhismaha oo lagu xoojiyay xargaha fiberlass-ka ayaa loo baahan yahay kuleyl kayar midka midka lagu xoojiyo birta.
Waxaad dhiseysaa sanado badan! Sababo la xiriira daweynta sare ee kiimikada iyo daxalka ee xoojinta agabyada isku-dhafan, nolosha adeegga ee fiberlass rebar ee la taaban karo ayaa ka badan 100 sano (marka la barbar dhigo analogues steel).
Waxaad u isticmaashaa qaanso qaloocsan mishiinka korantada oo aan sameynaynin koronto, sidaa darteed waxaad ku kordheysaa daah furnaanta raadiyaha oo aad yareynaysaa saameynta bey'adaha elektaroonigga ah
Waxaad u dhisaysaa guri la'aan "buundooyin qabow", maxaa yeelay xoojinta fiberglass ma qabato kuleylka, oo ka duwan tan birta. Wadamada cimilada qabow qaba, dhibaatada luminta kuleylka iyo qaboojinta darbiyada, sagxadaha iyo aasaaska ayaa si gaar ah deg deg ah u ah.
Waxaad fududaynaysaa habka goynta iyo goynta iyo yareynta kharashaadka shaqaalaha. Shaqaale kastaa wuxuu la tacaali karaa frp rebar qalab fara badan iyo dadaal.
Maxaad u doortaa rebarlass-ka diirka?
Waxaan ku soo saarnaa barafka caagga ah ee Ruushka waxaanna u isticmaalnaa oo keliya alaabta ceeriin oo tayo sare leh shirkadaha soo saara adduunka. Iyada oo ay ugu fiicantahay wareegyada wax soo saarka iyo soo saarida, qiimaha wax soo saarkayagu wuu hooseeya. Tani waa kuu faa iido.
Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon uguna raqiisan ee gaadiid waxaanan diyaarin doonnaa gaarsiinta meel kasta oo meeraha ah.
Cabbirka wax soo saarka sareeya
Dayax gacmeedka loo baahan yahay had iyo jeer waa la heli karaa, sababtoo ah waxaan ku shaqeynaa 24/7.
0.7 $/ mitir (10 mm rebar)
Resistance Corrosion. Waxay u adkaysataa waxyaalo fara badan oo kiimikooyin ah oo xasilloon markii biyo lagu dhex quusto.
Xoog. Minumum valuse waa 1000 MPa.
Miisaan. 8 jeer ayuu ka yaryahay birta. Si fudud ayaa loo qaadi karaa.
Rakibaadda. Si fudud ayaa loo gooyaa. Alxamid looma baahna.
Astaamaha kuleylka leh Kuleylku ma sameeyo. Dhaqdhaqaaqa kuleylka - 0.35 W / m * ° C.
Qiimaha. Qiimo jaban, gaarsiin rakhiis ah iyo nolol adeeg oo cimri dheer, kuwaas oo guud ahaanba yareeya qiimaha mashruuca.
Dhaqdhaqaaqa Korantada. Koronto ma qabato.
Furfurnaanta EMI / RFI. Ha dhexgalin calaamadaha raadiyaha iyo shabakadaha wireless. Ku fiican meelaha leh radaar, anteenooyinka, armaajooyinka korantada iyo qolalka MRI.
Modulus ee Elasticity - 55 GPa
2.21 $/ mitir (10 mm rebar)
Hawo-siin iyo dillaac ayaa suurtogal ah. Waxay u baahan tahay daaweyn ilaalin ah oo jawiga ciida.
Xoogga Tensile - 390 MPa.
Waxaad ubaahantahay qalab gaar ah oo kor loogu qaado iyo gaari weyn oo gaadiid lagu qaado.
Alxamid iyo goynta qalab gaar ah ayaa loo baahan yahay.
Waxay qabataa kuleylka. Coeffer ee dhaqdhaqaaqa kuleylka ayaa 12 jeer ka sarreeya - 25 W / m * ° C.
Qiimaha dayactirka sare
Waxay sameeyaan koronto
Waxay faragalin ku sameyneysaa calaamadaha EMI / RFI.
Modulus ee Elasticity - 200 GPa
Meelo bir ah
Ma jiraan wax su'aalo ah?
Waan ku raacsanahay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Kompozit 21 LLC © 2021 Khariidadda bogga
Waxaan u isticmaalnaa buskud si aan si wanaagsan u dheellitiro bartayada. Haddii aad sii wado isticmaalka goobta, waxaan u qaadan doonnaa inay kugu habboonaan doonto.OkQaanuunka Arrimaha Khaaska ah